Date My Pet » Types Four Of Men Women Go For
Last updated: Oct. 21 2020 | 3 Maminitsi verenga
Kiyi womunhu mwoyo hakusi kubudikidza dumbu rake. Zviri kuburikidza pfungwa dzake. Kushandiswa wepfungwa uye nekuonekwa unogona kukunda imi munhu hope dzako uye kutungamirira kuti dzorudo pfupi kana mufaro kwoupenyu hwose. Chero muri kutsvaka panguva iyi muupenyu hwako. Pakuziva unhu hwavo uye chii chinoita kuti tick ndiye anokosha uye kungaita iwe munzvimbo zvakasimba mumwoyo yavo. Below ndiyo mhando ina Mens’ unhu uye zvaungaita kuti murume vako.
Inotonhorera Guy ndiyo mhando Guy anotarisira kuva vanhu vakawanda muupenyu hwake. Zvinogona vorudzii kufanana maiva nomumwe munhu ane boka. Saka pamusana penyu angava pasi tuchitsvaka kuti munyika yake. Kuonekwa kunokosha kuti inotonhorera Guy. Kana iri achangobuda nemiitiro iye Akapfeka kana anotora ane Anti-fashoni patimire inotonhorera mukomana anofamba nechivimbo nguva dzose uye vanogona boarder pamusoro pamusoro-nechivimbo nguva. A inotonhorera mukomana anoda kuva musimboti pfungwa uye haangazvidembi kufanana kuti upstage iye akamurega vane hanya zvakadaro. Cool vakomana sedzimwe inotonhorera vakomana nevasikana uye idzodzi chete muchitonhorera vanhu pachavo saka kana uine nerdy unhu musaedza kuratidza kwavari kambani yake kusvikira iye kudaro murudo newe kuti havambofi mari asina iwe muupenyu hwake uye Chokwadi regai tohuratidza pamberi shamwari dzake! Cool majaya vanowanzotevedzera kuteerera zvakawanda kushamwari dzavo pane vakawanda nokuti kutora mamwe marudzi’ muchifunga vhangeri pamusoro yavo mutongo kuitira kuti anyare.
The High nehuma Bloke
Mukuru pahuma Guy ndiyo mhando Guy anogara anotarira dapper uye zvichida sutu. Iye kunoita kutaura nezvezvinhu kujeka nziyo, mabhuku, nezvimwewo … asi haana veers kupinda vade zvikuru eccentric zvinhu zvinhu kujeka muminda izvi. Izvi imhaka yokuti vane zvakakodzera chaizvo kana kuti zvavanofanira vanoda kuonekwa: kunzwisisana uye zvakakodzera. Kufanana inotonhorera dude
Kuonekwa zvinokosha mukuru pahuma bloke. Pane kunoita kuva snobbish Kufananidzira zvokutadza kwakadai murume. Reality TV uye ndizvo kutambisa nguva naye. Kuwana munhu akaita izvi unofanira kukwesha pamusoro wako kujeka ruzivo uye vapfeke akaoma zvikuru uye naka. Asi Usaedza snobbish pakuitika. Rangarirai unogona kudanana munhu snob pasina ari snob pachako. Chimwe chinhu chokufunga nezvacho nomupirista pahuma bloke anodya panze. Haana tichabvutwa akafa ari Datenroku pamwe zvakachipa chikafu kana MacDonalds. Zvimwe kungava hakusisina zvomugungwa kana tapas bhaa imi aipedzisira naye.
Mukomana-rinotevera-dhoo rako vakachena-cut, chinonhuhwira Guy. Anofarira kunwa asi kwete overdo uye iye uderedze vanoda zvikuru kwazvo mumhanzi, TV, nezvimwewo … The kugutsikana pamusoro mukomana-rinotevera-suo ndechokuti kutapira zvose uye chiedza chiri zvichida nhema. Vaikwanisa rikusvikirei. Zvichida pane hwakashata rutivi ikoko zvavakange chete vanoratidza kuti vari voga. Tinovimba vari mubhedhuru nokuda kwenyu! Ngazvive pachavo uye musaedza kuchinja ndivanaani asi kana uchifunga kuti vari akavanda seri yakachengeteka mufananidzo wavo uye tisingabvumiri kwavo chaiye ari umambo sezvo dzimwe nguva nyaya ine zvakawanda vakomana-rinotevera-musuo ipapo zvinyoronyoro kuvakurudzira kudaro nokuratidza kuti unoda chaiye navo uye kuti uchanakidzwawo. Asi regai vanosundira kukuomerai nokuti rinoda kuitwa panguva yavo kumhanya sezvo zvakaoma kwomunhu nokuzviremekedza regai kunze uko.
The Nerd zvakafanana mukuru pahuma bloke mupfungwa nokuziva zvinhu zvakawanda kujeka. Asi Nerd ruchigona kufanana chii Vakafanana vachiramba vade zvinhu anoratidza kana kuti kuratidza kuti akangwara vari. Uye kazhinji zvinhu kujeka havasi vose POSH uye zvakakodzera. The Nerd ndokwechokwadi chaizvo pakuonekwa havasi vose kukosha. Pane zvakawanda zvakasiyana siyana nerds kubva rockers kuti hippies kuti Whovians (Doctor Ndiani Fans) uye Sci-Fi mafeni. Ndivo vanhu anonakidza zvikuru asi kazhinji kuyambuka nokuti vanhu vanofunga nerds vari vowana dzorudo iyo vakawanda vanofunga zvisizvo. Nerds vakaita picky sezvo munhu uye vanoda kuti awane kukurukurirana zvakanaka vari shamwari. Pane unowanzonyengera kunonetsa Nerd nekuti kazhinji nerds akaiswa pasi kare. Munhu akaziva zvakasiyana ane zvakawanda kushivirira saka kuwana pfungwa kuvimba kunogona kuva kwakaoma. Kazhinji nerds vanowanzotevedzera kudanana dzimwe nerds nokuti kusununguka vanga pachavo navo asi kana iwe unogona kuratidza muri sedzisingasaruri ichi kunogona kutungamirira kuukama dzinonakidza, mafaro, munyoro uye yakanaka ukama.